SIGGRAPH 2019: ona shanduro mabhuku mumifananidzo - TELES RELAY
HOME » SAYENSI »SIGGRAPH 2019: tsvaga zvinyorwa zvesayenzi mumifananidzo
SIGGRAPH 2019: ona shanduro mabhuku mumifananidzo
Le SIGGRAPH 2019 ichaitwa kubva ku28 July kusvika August 1er kuLos Angeles. Sezvo gore rimwe nerimwe, masayenzi akawanda uye mabhuku ezvigadzirwa achabudiswa; chikamu chakanaka chavo chakatoverengwa uye chinowanikwa pane Ke-Sen Huang site.
Heino mavhidhiyo muchidimbu pamusoro kusarudzwa mabhuku aya: ikavhunduka chocolate, simulating rakapotsa musango kwenguva, itsva kuchangamuka chokushandisa, knitting, mufananidzo kumonyanisa uye video, achiita stylized kana VR dzakarongwa.
Tichava nemukana wekudzoka zvakanyatsoratidzwa pane mamwe mapurogiramu mumavhiki nemwedzi inouya.
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.3dvf.com/actualite-25952-siggraph-2019-decouvrez-publications-scientifiques-en-images.html
SpaceX yakamanikidzwa kunonoka basa rayo Starlink, zvakare, asi nokuda kwechikonzero chakasiyana - BGR